यौन सम्बन्ध राख्नकै लागि एक ब्यक्तिले बनाए आफ्नो घरदेखी छिमेकी महिलाको कोठासम्म सुरुङ्ग ! - Rahashya Khabar Online News Portal Rahashya Khabar Online News Portal
यौन सम्बन्ध राख्नकै लागि एक ब्यक्तिले बनाए आफ्नो घरदेखी छिमेकी महिलाको कोठासम्म सुरुङ्ग !
प्रकाशित मिति:2January, 2021 9:02 am
एजेन्सी। हामीले जेल ब्रेक गर्न सुरुङ खनेका समाचार त सुनेका थियौं तर प्रेम र यौनका लागि सुरङ खनिएको छ । परपुरुष र परस्त्रीसँगको सम्बन्धका लागि मानिसले के के सम्म मात्रै गर्छ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण यहाँ भेटिएको छ ।
एक बिवाहित पुरुषले एक बिवाहित छिमेकी महिलासँग सम्बन्ध राख्न आफ्नो घरदेखि ती महिलाको कोठासम्म सुरुङ बनाएको खुलासा भएको छ। छिमेकी महिलासँग प्रेम भएपछि ती पुरुषले सो सुरुङमार्फत त्यहाँ जाने गरेका थिए। जब ती बिवाहित महिलाका श्रीमान घरबाट बाहिर निस्कन्थे, प्रेमी सुरुङबाट ती महिलाको कोठामा पुग्थे। यो घटना मेक्सीकोको हो। डेलिमेलका अनुसार अल्बर्टो नामका ती पुरुषले सुरुङ बनाएको घटनाको पटाक्षेप एक दिन ती महिलाका श्रीमान जर्ज अफिसबाट छिटै घर फर्केपछि भएको हो।
घरमा उनले श्रीमती र उनका प्रेमी अल्बर्टोलाई रंगेहात फेला पारेका थिए। ती महिलाका श्रीमान घरमा पुगेपछि अल्बर्टो एकाएक गायब भए। जर्जले अल्बर्टोलाई निकै खोजे तर फेला पार्न सकेनन्। यसरी गायब भएपछि उनी पनि हैरान भएका थिए। उनले खोजी गर्दा त्यहाँ एक सुरुङ फेला पारे। अनि सुरुङबाट भित्र जाँदा उनी छिमेकमा अल्बर्टोको घरमा पुगे। अल्बर्टोले आफ्नो अफयरबारे आफ्नी श्रीमतीलाई केही नभन्न अनुरोध गरेका थिए। तर, डेलिमेलका अनुसार जर्जले सबै कुरा सार्वजनिक गरिदिए।
यस्तो छ पत्रकार महासंघको १३ बुँदे निर्णय:सर्वोच्च अदालतवाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिप्रति ध्यानाकर्षण
नेपाल पत्रकार महासंघको १२ औं पूर्ण बैठक विभिन्न निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ । अध्यक्ष
एजेन्सी । इन्डोनेशियाले हालै आफ्नो एक विवादित कानूनलाई बलियो बनाउँदै एक सरकारी नियमावली पास गरेको
तेरापन्थ महिला मण्डल काठमाडौको जुम प्रबिधि प्रयोग गरि सम्बर्द्धन कार्यशाला
काठमाडौं, १८ पुस २०७७ । नेपाल तेरापन्थ महिला मण्डल ,काठमाडौको जुम प्रबिधि प्रयोग गरि सम्बर्द्धन